အာဟာရ - Bezzia | Bezzia (စာမျက်နှာ 3)
ပင်လယ်ကကျွန်ုပ်တို့အားပေးသောခဲဖွယ်စားဖွယ်များအနက်တစ်ခုမှာ mollusks များဖြစ်ပြီး၎င်းတွင်သဘာဝပရိုတင်းဓာတ်နှင့်ကျန်းမာသောအဆီများဖြစ်သော mussels တို့ဖြစ်သည်။
ချိုမြိန်အာလူးသို့မဟုတ်အာလူးချိုချိုသည်ယခုမှ စ၍ သင်၏ကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်စေရန်သင်၏အကောင်းဆုံးမဟာမိတ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်မီးဖိုချောင်တွင်စွယ်စုံသုံးနိုင်သောချိုမြိန်သောအရသာရှိသည်။
လူအနည်းငယ်ကမုန်ညင်းကို mayonnaise (သို့) ketchup လောက်စားသုံးသဖြင့်၊ မုန်ညင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အကျိုးရှိသည်။
သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် beets ၏အကျိုးကျေးဇူးများ
သငျသညျရှာဖွေတွေ့ရှိသင့်ကြောင်း beets ၏အကျိုးကျေးဇူးများအများကြီးရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေး၊ အရိုးများနှင့်အခြားပိုမိုလေးနက်သောရောဂါများကိုရှောင်ရှားရန်အကောင်းဆုံးသောအစားအစာ။ သင်ကနည်းလမ်းများစွာဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်သင့်ကိုယ်သင်ယခုဂရုမစိုက်ရန်အကြောင်းပြရန်အကြောင်းမရှိပါ။
သင်၏ကျန်းမာရေးကိုတိုးမြှင့်ရန်အရသာရှိသောနည်းလမ်းမှာ cayenne ငရုတ်ကောင်းကိုစားသုံးခြင်း၊ ၎င်း၏အကောင်းဆုံးဂုဏ်သတ္တိများကိုသိရန်နှင့်၎င်းသည်၎င်း၏စားသုံးမှုကသင့်ကိုမည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်နည်း။
ကွဲပြားခြားနားသော ginseg အမျိုးအစားများရှိသည်။ အာရှဂျင်ဆင်းသည်သင့်ကိုအကောင်းဆုံးဂုဏ်သတ္တိများကိုပေးလိမ့်မည်။ အကောင်းဆုံးအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ဘာကြောင့်စားသုံးသင့်သည်ကိုသိပါ။
ကျန်းမာရေးကအရေးကြီးတယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ရမယ်၊ ပြီးတော့လတ်ဆတ်တဲ့တော်ပါစေတော်ဝင်မင်းဂျယ်လီကိုစားသုံးခြင်းထက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ ၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုသိပါ။
သင်၏နေ့စဉ်နှင့်အမျှကျန်းမာရေးပြproblemsနာများစွာကိုဖြေရှင်းနိုင်သည့်ဆေးဖက်ဝင်အပင်တစ်မျိုးဖြစ်သော Sage သည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအကျိုးကျေးဇူးများကိုသိသင့်သည်
Alfalfa အကျိုးကျေးဇူးများ, ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်မည်သို့စားသုံးဖို့ဘယ်လို
သဘာဝကကျွန်တော်တို့ကိုအပင်တွေပေးတဲ့အားသာချက်တွေအားလုံးကိုသိဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်၊ သခင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကျန်းမာစေဖို့ alfalfa ကကူညီပေးနိုင်တယ်။
ပရိုတင်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သူတို့သည်ကြွက်သားများနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုစွမ်းအင်ဖြင့်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဒါ့အပြင်ကိုယ်အလေးချိန်များအတွက်စံပြ။
လက်ဖက်ရည်ကြမ်း (Black tea) ၏ကောင်းကျိုးကိုယူပါ၊ ၎င်းသည်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးများကိုသိပြီးသင်ကျန်းမာနေလျှင်တစ်နေ့လျှင်ခွက်နှစ်ခွက်သောက်ရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။
Kale သည်ဖက်ရှင်ဖြစ်လာပြီးအလွန်ကောင်းမွန်သောအစားအစာဖြစ်လာသည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ထောပတ်သီးသည်သင့်အတွက်ဘာလုပ်ပေးသည်ကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါ။ ၎င်း၏အာဟာရဓာတ်များကကိုလက်စထရောပြissuesနာများနှင့်သင့်ကိုကူညီပေးနိုင်သည်။ သင်၏နှလုံးကိုဂရုစိုက်ပြီးယေဘုယျအားဖြင့်သင့်ကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်နိုင်သည်။
propolis သို့မဟုတ် propolis ကိုဘာအတွက်အသုံးပြုသလဲ။
ပရိုပိုလစ် (propolis) သို့မဟုတ်ပရိုပိုလစ် (propolis) သည်ပျားများအုံမှဖုံးအုပ်ထားသည့်သဘာဝဓာတုဗေဒဆေးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများရှိသည်။
Elderberry ကိုကိုယ်ခန္ဓာကျန်းမာရေးကောင်းမွန်စေရန်အကောင်းဆုံးနည်းဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်း၏ဂုဏ်သတ္တိများကသင့်ကိုစိတ်ပျက်စေမည်မဟုတ်ပါ။
ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအာဟာရအချို့ရှိရန်အရေးကြီးသည်၊ သို့မှသာသင်ပျော်ရွှင်ပြီးပျော်ရွှင်နိုင်သည်။ အစားအစာကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကျနိုင်သည်။
Rhubarb၊ အဲဒါဘာလဲ၊ အဲဒါကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုအကျိုးပြုသလဲ
Rhubarb သည်စပိန်နိုင်ငံတွင်ကျယ်ပြန့်စွာပျံ့နှံ့နေသောအသီးများသောဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အရသာအလွန်ကြွယ်ဝသော၊ မုန့်ချိုပြုလုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည်၊ ၎င်း၏ဂုဏ်သတ္တိများအားလုံးသိသည်။
Detox shakes များအတွက်ဤကျန်းမာပြီးအရသာရှိသောချက်ပြုတ်နည်းများကိုမလွတ်ပါနှင့်။ သဘာ ၀ ပါဝင်ပစ္စည်းများဖြင့်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အသားအရေကိုဂရုစိုက်ရန်နည်းလမ်း။
Star anise - ကိုယ်ခန္ဓာအတွက်အသုံးပြုမှု၊ ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ
Star anise ပြုတ်ရည်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုဂရုစိုက်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအစာကြေခြင်းနှင့်အစာအိမ်အတွင်းအပြည့်အဝထားရှိရန်ကူညီပေးသည်။
ကိုယ်အလေးချိန်ကျရန်အကောင်းဆုံးရေညှိများထဲမှတစ်ခုမှာ fucus ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအထူးစတိုးဆိုင်များတွင်တွေ့နိုင်သည်။ ၎င်းတို့ကိုနံနက်တိုင်းအိပ်ရာထ။ လက်ျာခြေထောက်တွင်စတင်နိုင်သည်။
ဆောင်း ဦး ရာသီအစားအစာများနှင့်၎င်းတို့၏အလွန်ကြီးစွာသောအကျိုးကျေးဇူးများကို
ဆောင်း ဦး ရာသီ၏အစားအစာများနှင့်သင်သိသင့်သောကောင်းကျိုးများအားလုံးကိုလက်လွတ်မခံပါနှင့်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်မီနူးသို့ပေါင်းစပ်ရန်ပြီးပြည့်စုံသောအစားအစာများ။
ရာသီအလိုက်အသီး, ဆောင်း ဦး
ဆောင်း ဦး ရာသီအသီးများသည်ပျော်စရာကောင်းသည်။ ယခုရာသီတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားဗီတာမင်များနှင့်သတ္တုဓာတ်များစွာထောက်ပံ့ပေးသောအသီးများတွေ့ရသည်။
ရေဓာတ်ပြည့်ဝသောအသီး ၈ မျိုးသည်သင့်ကိုရေဓာတ်ဖြည့်တင်းရန်ကူညီပေးနိုင်သည်
ကောင်းမွန်သောရေဓာတ်ရရှိရေးအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောရေပေါများသောဤအသီး ၈ မျိုးရွေးချယ်ခြင်းကိုလက်မလွတ်ပါနှင့်။ သူတို့ကိုနေ့တိုင်းယူပါ။
celiacs များအတွက်သင့်လျော်သောဂျုံ, buckwheat မှအခြားရွေးချယ်စရာ
သဘာဝတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖြေရှင်းချက်ကိုတွေ့ရှိသည်။ celiacs အများစုသည်အရည်အသွေးမြင့်သောထုတ်ကုန်များကိုစားသုံးရန်၊ ၎င်းသည်အဘယ်အရာကိုရှာဖွေရန်ဂျုံဂျုံကိုရွေးချယ်ကြသည်။
ဗီတာမင် D ချို့တဲ့ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ကြုံရသောလက္ခဏာများ
ဗီတာမင် D သည်အလွန်မေ့သွားနိုင်သည်၊ နေပူကိုကာကွယ်ရန်နှင့်အောက်ပါရောဂါလက္ခဏာများကိုရှောင်ရှားရန်၎င်းတွင်ကြွယ်ဝသောအစားအစာများကိုစားသုံးရမည်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်အမြောက်အများကိုတွေ့ရပြီးဟင်းသီးဟင်းရွက်ပရိုတင်းများပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းတို့သည်အသားကိုမစားသောသူများအတွက်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျန်းမာရေးတွင်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ဗီတာမင်များ A၊ B, C, D, E နှင့် K. ဗီတာမင်များအားလုံး၏လုပ်ဆောင်မှုအကြောင်းပြောကြသည်။ ထို့အပြင်မည်သည့်အစားအစာများကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာတွေ့နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြသည်။
နေ့စဉ်အစားအစာတွင်မည်သည့်အစားအစာများကိုသင်လိုအပ်ကြောင်းစစ်ဆေးပါ။ ကျန်းမာသန်စွမ်းသောကိုယ်ခန္ဓာအတွက်ပရိုတိန်းနှင့် antioxidants များများလာသည်။
ဒီအပိုကီလိုဂရမ် yerba အိမ်ထောင်ဖက်၏အကူအညီဖြင့်ဖယ်ရှားပါ
Yerba အိမ်ထောင်ဖက်သည်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်လူကြိုက်များလာသည်။ ၎င်းသည်ပူပြင်းခြင်း (သို့) အအေးမိခြင်းများကိုလောင်ကျွမ်းစေပြီး၎င်းသည်မည်မျှကျန်းမာသည်ကိုသင်အံ့အားသင့်လိမ့်မည်။
နနွင်းနှင့်ပျားရည် gelatin Cube၊ သဘာဝကျခြင်းကိုရောင်ရမ်းခြင်း
celiacs များအတွက်သင့်လျော်သော Batters
အညစ်အကြေးနှင့် ပတ်သက်၍ ပျော်စရာအဖြစ်မှန်
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကျန်းမာရေးအတွက်သီးသန့်အစားအစာနှင့်စပ်လျဉ်း။ သိလိုသည့်အချက်အလက်များအကြောင်းဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြပါမည်။ သငျသညျသူတို့ထဲကအများအပြားသိသလား
အကောင်းဆုံး diuretic အပင်များ, အရည် retention ကိုအဆုံးသတ်ထားသည်
အရည်ထိန်းသိမ်းခြင်းသည်လူအများခံစားနေရသောပြisနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သဘာဝတွင် Diuretic အပင်များအမြောက်အများကိုတွေ့ရှိပြီး၎င်းကိုဖယ်ရှားရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်
chia အစေ့များကိုသင်၏အစာထဲတွင်ထည့်သွင်းရန်အကြောင်းပြချက် ၆ ချက်
သင်သည် chia မျိုးစေ့များနှင့် ပတ်သက်၍ သံသယဖြစ်ခဲ့ပါက၎င်းတို့ကိုသင်၏အစားအစာနှင့်ပေါင်းစပ်ရန်သင့်အားအကြောင်းပြချက် (၆) ချက်ကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိသည်။ သငျသညျအပြောင်းအလဲများကိုသတိထားမိပါလိမ့်မယ်!
သဘာ ၀ အရဟင်းသီးဟင်းရွက်အမျိုးအစားလေးမျိုးရှိပြီးသကြားဓာတ်ပါဝင်မှုနည်းစေပြီးဒီအပင်များနှင့်ဆီးချိုရောဂါကိုတိုက်ထုတ်နိုင်သည်
Macadamia ခွံမာသီး, အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ဂုဏ်သတ္တိများ
macadamia nut သည်သင့်အားခွန်အားပြန်လည်ရရှိစေခြင်း၊ လက်စထရောမကောင်းခြင်းကိုလျော့နည်းစေပြီးကိုယ်အလေးချိန်ကျစေခြင်းအားဖြင့်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဝမ်းကို deflate ရန်အကောင်းဆုံးသောအစားအစာများ
သရက်သီးသည်လူတစ် ဦး အားခန်ဓာကိုယ်ရရှိစေသည့်အကျိုးကျေးဇူးများအားဖြင့်နေ့စဉ်စားသုံးသင့်သောအသီးတစ်ခုဖြစ်သည်။
ရှာလကာရည်များစွာရှိသည်၊ သို့သော်သင်တစ် ဦး စီအတွက်အဘယ်အရာနှင့်ဘာအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်သည်ကိုသင်လေ့လာရန်လိုအပ်သည်
Umeboshi သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးကိုပြောင်းလဲစေသည့်ဂျပန် berricot အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အားပိုမိုကောင်းမွန်သောခံစားမှုဖြစ်စေရန်ကြီးမားသောဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများရရှိစေသည်။
ဘီယာကုမ္ပဏီ၏တဆေးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်၏ gastronomy တွင်ဗဟိုအဆင့်သို့ရောက်ရှိနေပြီး၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါကလျော့နည်းသွားမည်မဟုတ်ပါ
အစာအာဟာရကိုစားသုံးခြင်းဟာအပြင်မှာရော၊ အတွင်း၌ပါကောင်းမွန်စွာခံစားရရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ များသောအားဖြင့်လူများစွာလိုအပ်သည် ...
စည်သွတ်ဘူးသည့်အစားအစာများသည်တစ်နေ့တာ၏အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ အိမ်အများစုနှင့်စားသောက်ခန်းများတွင်အခြေခံဖြစ်သည်။ သူတို့အလုံအလောက်ကောင်းမလားဆိုတာငါတို့ရှာတယ်
လူအများစုသည်နံနက်ခင်းတွင်ကော်ဖီသောက်သည်၊ သကြား၊ နို့သို့မဟုတ်အခြားအရသာများထည့်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်သူတို့၏ကျန်းမာရေးကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေသည်ကိုလူအများမသိကြပါ။
၎င်းသည်ချို။ ကျန်းမာစွာစားနိုင်သည်၊ သင်၏ရိုးရာအချိုပွဲချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သောသဘာဝအစားထိုးနည်းများကိုလေ့လာနိုင်သည်
ဆောင်း ဦး ရာသီ၌သလဲသီးသည်သင်၏ကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်သည်
ဆောင်း ဦး သီးသောအသီးအနှံအကောင်းဆုံးသည်သလဲသီးဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုမမေ့ပါနှင့်။ သင်နှင့်သင်၏ကျန်းမာရေးအတွက်ပြုလုပ်နိုင်သမျှကိုလေ့လာပြီးအကျိုးရယူပါ
နေ့စဉ်အစားအစာများပိုမိုလှပဖို့အတွက်အစားအစာများ - သင်ယခုသင့်အစားအစာမီနူးထဲသို့သင်ထည့်သွင်းသင့်သည့်စုစုပေါင်းအစားအစာ ၁၀ ခုစာရင်းဖြစ်သည်။
သင်သည်သင်၏ elastic နှင့်နုပျိုသောအသားအရေကိုပြသလိုလျှင်သင်၏အသားအရေအတွက်အကောင်းဆုံးသောကော်လာဂျင်ပမာဏရှိသောအောက်ပါအသီးများကိုမလွတ်ပါစေနှင့်။
မင်းငါ့ကိုဆားသွားပေးနိုင်မလား? ဟုတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဘယ်သူတွေလဲ
နွေရာသီအဘို့အ Aphrodisiac အစားအစာများ
aphrodisiac အစားအစာများသည်မည်သည့်အရာဖြစ်ကြောင်းလေ့လာပြီးသိပါ။ သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်အတူညအားစိတ်အားထက်သန်စွာနေထိုင်ရန်သူတို့၏အစိတ်အပိုင်းများကိုအသုံးချပါ
ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းနာကျင်မှုပြင်းထန်ခြင်းသည်အစာအိမ်နာကျင်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ပို၍ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာဖြစ်နိုင်သည်။
Chia အစေ့များသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအစားအစာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းတို့အားပြန်လည်လေ့လာခြင်း၊ ၎င်းတို့အကြောင်းကိုအရာအားလုံးကိုလေ့လာပြီးသင့်နေ့စဉ်အစားအစာထဲသို့ထည့်သည်
အစိမ်းရောင်ဖျော်ရည်များသည်လူကြိုက်များသောချောချောမွေ့မွေ့များဖြစ်ပြီးဗီတာမင်များနှင့်အာဟာရများပါ ၀ င်ပြီးသင့်ကိုလတ်ဆတ်စေပြီးတစ်နေ့လုံးဖြည့်နိုင်သည်
နာနတ်သီး - ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့အကောင်းဆုံးသောမဟာမိတ်
Quinoa သည်လူကြိုက်များလာသည်နှင့်အမျှမသေးပါ။ ဤသေးငယ်သောအစာသည်အတွင်း၌စားသုံးသူများအတွက်အကျိုးရှိသည့်ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်
ဗာဒံသီးသည်ဆီလျော်မှုရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့ကျန်းမာရေးအတွက် ၄ င်းတို့၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုနက်ရှိုင်းစွာဆက်ဆံသည်။ ရောဂါများစွာကိုကာကွယ်ပေးသည်။
သဘာဝပantibိဇီဝဆေးတန်းတူ - ကြက်သွန်ဖြူ
ဆေးပညာကောလိပ်မှထုတ်ပယ်ခံရသော Pierre Dukan
ကျော်ကြားသော Pierre Dukan သည်ပြင်သစ်ဆေးသမားကောလိပ်မှအမြဲတမ်းမောင်းထုတ်ခံရသည်။ အဖှဲ့အစညျးသညျသူ့ကိုထုတ်ပယ်ရန်လုံလောက်သောအကြောင်းပြချက်ရှိသည်
lipids ဆိုတာဘာလဲ။ ဘာကြောင့်လိုအပ်သလဲ။
အပင်နှင့်သတ္တဝါများတွင်တွေ့ရသောအဆီနှင့်အလားတူပစ္စည်းများပါ ၀ င်သည်။ ဘိုဟိုက်ဒရိတ်နှင့်ပရိုတိန်းများကဲ့သို့သူတို့သည်အလွန်အရေးကြီးသောအော်ဂဲနစ်မော်လီကျူးအုပ်စုတစ်စုဖြစ်ပြီးဆေးဝါးဗေဒ အသုံးပြု၍ ဓာတုဗေဒလုပ်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကိုဖွဲ့စည်းသည်။
ငါ diverticula ရှိပါကအဘယ်အရာကိုစားရန်နှင့်အဘယ်သို့စားရန်မဟုတ်လော
သင့်ဆရာ ၀ န်ကသင့်အား diverticula ဟုခေါ်ဆိုပါကရောဂါလက္ခဏာများကိုလျှော့ချရန်သင်ပြုလုပ်သင့်သည့်အရာတစ်ခုမှာ ...
မင်းတို့ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေမယ့်ဒဏ္myာရီ ၁၃ ခု
နောက်ဆုံးအနေနဲ့မျှတမှုမရှိသောအစားအစာကို ဦး တည်သွားစေသည့်ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောဒဏ္sာရီများနှင့်အယူအဆများသည် ...
အဆိုပါ Transgene အစားအစာများအားလုံးပါဝင်ပစ္စည်းများဆံ့သို့မဟုတ်မျိုးရိုးဗီဇပြုပြင်မွမ်းမံမှထုတ်လုပ်ခဲ့ကြသောသူတို့အားအစားအစာများကို ... ။
ကျော်ကြားသောအစားအစာများ - ဒဏ္myာရီများနှင့်အဖြစ်မှန်
အုပ်စု B ကိုဗီတာမင်
ဤဗီတာမင်အုပ်စုသည်ဇီဝြဖစ်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ အစပိုင်းတွင်၎င်းသည်တစ် ဦး တည်းဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်သိသည်။
L Casei ဆိုတာဘာလဲ။
Lactobacillus casei သည်ဇီဝသက်ရှိများဖြစ်သည့် Yakult သို့မဟုတ် Actimel
အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် 40 ပြီးနောက်အလေးချိန်ရသနည်း
ကျွန်တော်တို့ဟာအသက်အကြီးဆုံးအရွယ်ရောက်ရင်ကိုယ်အလေးချိန်တက်လာကြပြီးအဲဒီကီလိုဂရမ်တွေကကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့ပိုခက်ပါတယ်။ အခြေအနေတစ်ခုကျိန်းသေတယ် ...
အသည်းရောင်ရောဂါရှိသောသူများသာလျှင်၎င်းသည်သာမန်ဘဝဖြစ်ရန်၎င်းတို့အားအလေးပြုသည်ကိုသိသည်။ သည်းမခံ ...
သငျသညျကမ်းခြေမှာတနေ့လုံးဖြုန်းသောသူတို့ထဲကတ ဦး လား မင်းဘာစားတယ်ဆိုတာသတိထားပါ။ သင်အလွဲသုံးစားလုပ်ပါက ...
ရုံးသို့ယူရန်5ကျန်းမာ menus တွေကို
အလုပ်ခွင်၌စားခြင်းသည်အစာစားခြင်းနှင့်ညံ့ဖျင်းခြင်းတို့နှင့်တူသည်မဟုတ်ပါ။ သင်ကောင်းစွာစုစည်းနိုင်လျှင်သင်လုပ်နိုင်သည် ...
စျေးနှုန်းများမြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှမွန်းတည့်ချိန်၌အစာစားခြင်းက ပို၍ ကုန်ကျသည်။ ဒါကြောင့် MujeresconEstilo.com မှာငါတို့ကိုမင်းတို့ဆီကိုခေါ်လာတယ်။